Gaarsiinta ubaxyo ubax ah - had iyo jeer waa lacag la'aan Moscow
Ka dib markii amarka la dhigo goobta, macluumaadka ku saabsan tan isla markiiba wuxuu aadayaa adeegga bixinta ee barta ama ubaxleyda gaarka loo leeyahay ee aad dooratay. Waad kormeeri kartaa heerka uu amarkaagu u adeegsanayo xogta ku jirta koontadaada websaydhka.
Gaarsiinta Moosko waa lacag la'aan (gudaha xadka magaalada). Gaarsiintu sidoo kale waa bilaash haddii aysan dhaafin wareega wareega. Haddii qaataha bouquet uusan joogin Moscow, qiimaha adeegga waxaa dejiya dukaan ubax ama si toos ah ubaxa ubaxa waxaana loo xisaabiyaa si otomaatig ah iyadoo ku xiran tirada kilomitir ee wareega wareega ee ku xusan foomka dalabka. Waxay ku xirnaan doontaa masaafada, siday u kala horreeyaan.
Waqtiga bouquetka laguu keenayo waxay kuxirantahay kakanaanta shaqada iyo xaalada taraafikada. Sharaxaadda badeecada goobta ku taal waxay muujineysaa muddada ay qaadaneyso in la keeno bouquet-kan magaalada Moscow Kadib markaad dalbato amarkaaga, waxaa laguu soo dirayaa fariin qoraal ah oo sheegeysa in amarka la aqbalay. Ka dibna - in amarka la keenay, oo waxaad kaloo arki kartaa sawir ah bouquet la geeyay iyo sawir qaataha, haddii cinwaanka uusan diidin inuu sawir la qaato bouquet-ka.
Faallooyinka ku saabsan meelaha lagu qurxiyo
Milkiilayaasha faraxsan ee ubaxyada